दराजले यही जुन २४ बाट ‘दराज मोबाईल वीक’ शुरु गर्ने
कर्पोरेट नेपाल , ६ असार २०७६, शुक्रबार, ०३:५५ pm
काठमाडौं । नेपालको अनलाइन् शपिङ गन्तव्य दराजले यही जुन २४, २०१९ तारिख बाट दराज मोबाईल वीक शुरु गर्ने भएको छ । उक्त अभियान मा उपभोक्ताहरुले फोन, ल्यापटप, टिभी, एक्सेसरिस, तथा अन्य ग्याजेटहरुमा भारी छूट पाउनेछन् । एक हप्ता को यो अभियान उपभोक्ताहरुको लागी किफायती हुनेछ ।
उक्त अभियान भरी उपभोक्ताहरुले नयाँ फोनहरुको लन्च देखी लिएर भौचारस्,फ्ल्याश सेल्स, र अन्य डिस्काउन्ट्सको मज्जा लुट्न पाउनेछन् । सबै गरी फोन हरुमा ५४ प्रतिशत , र एक्सेसरिसमा ७३ प्रतिशतको छुट रहेको जनाएको छ । साथै, उपभोक्ता हरुले मोबाईल वीक म सपिङ गरे बापत आइ फोन एक्सआर जित्ने मौका पाउनेछन् ।
यसको साथै दाराजले ६ बैंकहरुसँग मिली कार्ड पेमेन्टमा पनि भारी छूटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त अफरहरु यस प्रकर रहेका छन् । यदी हामीसँग उक्त बैंकहरुको कार्ड छ तर अन्लाईन पेमेन्ट सुचार छैन भने तुरन्तै आफ्नो बैंकसँग सम्पर्क गरी सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ ।
दराजमा डेबिट कार्डबाट भुक्तानी कसरी गर्ने ?
१. कार्ड सुचारु गर्नु
यदी छैन भने, बैंक सँग सम्पर्क गरी आफ्नो कार्डमा अन्लाईन पमेन्ट सुविधा शुचारु गर्नुपर्नेछ
२. पेमेन्ट गर्ने तरिका रोज्ने
सामान छानिसकेपछी दराजको चेक आउट पेजमा पेमेन्ट अप्सन रोज्नुहोस्
३. कार्डको विवरण भर्ने
आफ्नो कार्डको विवरण भरी सेभ सेलेक्ट गर्ने
४. सामान अर्डर गर्ने
ईमेल अथवा एस एम एस द्वारा पाउनुभएको ओटीपी (वन टाइम पास्वर्वड) भर्ने र अर्डर कन्फर्म गर्ने दराज एपमा तपाईको कार्डको विवरण सत्प्रतिशत सुरक्षित रहने जनाईएको छ ।
उक्त बारेमा दराज का प्रबन्ध निर्देशक जय कवी भन्दछन्, “दराज को एप पिसी.आइ.डि.एस.एस को पूर्ण पालना गरी तपाईको कार्डको जानकारी सुरक्षित भल्टमा राख्दछ । तथा साथै नयाँ प्राणाली, ओटीपी र र सिभिभिले गर्दा, तपाईको कार्ड को जानकारी सत्प्रतिशत सुरक्षित रहनेछ । त्यसैले, ढुक्क भएर कार्ड प्रयोग गर्न सकिने जनाईएको छ । थप जानकारीका लागि दराजको वेवसाईटमा जानुपर्नेछ ।
सांग्रिला बैंकको बैंकिङ सुविधा अब मोबाइलबाटै पाइने